काँग्रेसले मित्रशक्ति नै चिनेन - Arthikbazar.com
Arthikbazar.com – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस बहुप्रतीक्षित महासमिति बैठक औपचारिक रूपमा शनिबारबाट सुरु हुँदैछ ।
महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विधान मस्यौदा, राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र साङ्गठानिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएर छलफलसमेत भइसकेका छन् ।
तर यी चारवटा प्रतिवेदनमध्ये आर्थिक प्रतिवेदनबाहेक अरू कुनै पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित हुन सकेन ।
बाँकी प्रतिवेदन र दस्तावेजमा सहमति जुटाउन काँग्रेसका दुई शीर्ष नेता अहिलेसम्म प्रयासरत छन् ।
खासगरी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाइनिकट विजय हासिल गरेपछि खुम्चिन बाध्य बनेको काँग्रेस त्यसपछि लगातार कमजोर र शिथिल बन्दै आएको छ ।
नेतृत्व तहमा विवादैविवाद र गुटउपगुट मौलाएका कारण केन्द्रदेखि गाउँसम्मै यो पार्टी धु्रवीकृत बनेको छ ।
महासमितिले सङ्घीयताअनुसारको उपयुक्त विधान अनुमोदनसँगै भावी कार्यदिशा समेत तय गर्ने आम काँग्रेसी अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसारका दस्तावेज नै नआएकाले काँग्रेस सुधारतर्फ नगएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
‘तीनवटै निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि काँग्रेसको भविष्यबारे धेरै नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाए ।
तर त्यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले दिन सकेनन् । बरु नेतृत्व आफै एकले अर्कालाई दोष देखाउने र आफू उम्कने प्रयासमै देखिन्छ । यस्तोबेला हुन लागेको महासमिति बैठकले कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, काँग्रेस नेता कार्यकर्ता, सुभेच्छुक र समर्थकहरूले त्यसको जवाफ नपाउन सक्छन्’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ ।
विश्लेषक आचार्यका अनुसार महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दस्तावेजले नै काँग्रेसको आगामी यात्रा र भविष्य निर्धारण गर्छ । तर प्रस्तुत दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा महासमिति बैठकले उही पुरानै कर्मकाण्डीबाहेक निश्चित दिशा दिन नसक्ने देखिन्छ ।
काँग्रेसको मित्र शक्ति को ?
काँग्रेसले देशभित्र र बाहिरको आफ्नो मित्र शक्ति नै छुट्याउन सकेको छैन । मङ्सिर २५ गते बसको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले प्रस्तुत गरेको उक्त राजनीतिक प्रस्ताव निकै लामो र गोलमटोल भएको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ ।
‘मूलतः यस्तो बेलामा ल्याइएको राजनीतिक प्रस्ताव प्रष्ट हुनुपर्छ, जुन चुनौतीलाई परास्त गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । तर प्रस्ताव हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन, चुनौतीको सामना गर्नेभन्दा पनि इतिहासको गौरव गर्नमै प्रतिवेदन केन्द्रित देखिन्छ । यसले गर्दा काँग्रेस आफैं अलमलिएको भान हुन्छ’, आचार्यले प्रतिवेदनप्रति सङ्केत गर्दै भने, ‘सत्ताको च्याँखे थाप्नेजस्तो छ । नयाँ डिपाचर केही छैन । काँग्रेसको मित्रशक्ति को हो भन्नेसम्म खुलाइएको छैन ।’
उनले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्ने हो वा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ता राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति निराश बन्नसक्ने बताए । उनले मधेसवादी दल वा राप्रपा, काँग्रेसका मित्रशक्ति हुनसक्ने भए उनीहरूलाई त्यही किसिमले परिभाषा गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । भने, ‘मधेसवादी दल मित्रशक्ति हुनसक्छन् भने कुन मधेसवादी दल वा कुन राप्रपा ? त्यो पहिचान गर्न जरुरी भए पनि प्रस्तावमा त्यो नखुलाइएकाले गोलमटोल छ ।’ यद्यपि महासमिति बैठकले त्यस्ता प्रस्ताव या प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नसक्ने अवस्था भने कायमै रहेको आचार्यको भनाइ छ ।
वैदेशिक नीति अस्पष्ट
काँग्रेसको प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले लिने वैदेशिक नीतिका बारेमा पनि कुनै ठोस नीति नबनाइएको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा पनि काँग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव गुमनाम जस्तै छ । ‘काँग्रेस चीनसँग नजिक हो वा भारतसँग ? त्यो प्रष्ट छैन, जसले गर्दा काँग्रेस अवसरवादी त होइन भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ’, विश्लेषक आचार्य भन्छन्– ‘यसले काँग्रेसको धारणा बुझ्न कठिनाइ हुन्छ ।
प्रस्तावित काँग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा विदेश नीतिबारे आठवटा बुँदामा समेटेको छ ।